Pregorexia, uloyiko lokufumana ubunzima ngexesha lokukhulelwa | Bezzia
UToñy Torres | 11/01/2022 23:55 | Ukukhulelwa
Kukho uloyiko oluninzi olunokuvela malunga nokukhulelwa, ngakumbi xa ungumntu wokuqala. Nantoni na engaziwayo ibangela inkxalabo, kuba ukungaqiniseki kwe ukungazi ukuba kuzakwenzeka ntoni kuvelisa amanqanaba aphezulu oxinzelelo. Kwabanye abafazi abajongene nazo zonke iinguqu zokukhulelwa kumnandi, kodwa kwabanye abaninzi, luloyiko olukhulu.
Uloyiko lokufumana ubunzima ngexesha lokukhulelwa lukhona, luneempawu eziqhelekileyo kunye negama elifanelekileyo, ngokukodwa i-pregorexia. Le ngxaki, nangona ingabandakanywanga kwi-Manual of Mental Disorders njengezinye izifo ifana ne-anorexia okanye i-bulimia, yinyani kwaye yaziwa ngokuba yianorexia yabasetyhini abakhulelweyo.
1 Yintoni i-pregorexia?
1.1 Iimpawu zokuphazamiseka kokutya kwabasetyhini abakhulelweyo
1.2 Imingcipheko ye-pregorexia kumama nosana
I-Pregorexia kukuphazamiseka kokutya okwenzeka kuphela ngexesha lokukhulelwa. Uphawu oluphambili lwesi sifo luloyiko lomama ozayo lokufumana ubunzima. Ingxaki enokubeka impilo kamama kunye nosana emngciphekweni. Le ngxaki yokutya yabelana ngeempawu nezinye ezifanayo. I ndikhulelwe yenza umthambo ngokugqithisileyo Ukulawula ngokugqithisileyo ukutya okunekhalori, ukongeza kukutya okuqhelekileyo kunye nokucoca okulandelayo.
Esi sifo singenzeka kubasetyhini abangakhange babe neengxaki zokutya ngaphambili. Nangona kunjalo, ngokuqhelekileyo kwenzeka kubasetyhini ababekhe bahlala okanye bahlala benengxaki yokutya, njenge-anorexia okanye i-bulimia. Noko ke, ukuba naloo ngxaki kwixesha elidlulileyo akusosiqinisekiso sokuba inokukhula ngendlela efanayo ekukhulelweni.
Iimpawu zokuphazamiseka kokutya kwabasetyhini abakhulelweyo
Asingabo bonke abafazi abafumana utshintsho kwimizimba yabo ngendlela efanayo, nangona ngokuqhelekileyo besamkelwa ngokwemvelo kwaye becinga ukuba kungenxa yokuba ubomi obutsha bukhula ngaphakathi kwakho. Kwabanye abafazi, ukubona indlela isisu sikhula ngayo, kodwa kwabanye, akunjalo ngaphandle kokuba yingxaki. Nangona kunjalo, xa uloyiko lokufumana ubunzima lunemvelaphi yengqondo, ezi mpawu ezinxulumene ne-pregorexia zinokuvela.
abakhulelweyo kuphephe ukuthetha ngokukhulelwa kwakho okanye ikwenza ngendlela engeyonyani, ngokungathi ibingekho kuye.
Kuphephe ukutya phambi kwabanye abantu, ukhetha ukutya ngasese.
Unomdla kakhulu bala iikhalori.
Uzilolonga ngokungaqhelekanga, ngokugqithisileyo, ngaphandle kokuqwalasela iimpawu eziqhelekileyo zokukhulelwa.
Basenokuzigabha, nangona baya kuhlala bezama ukwenza oko ngasese.
Kwinqanaba lomzimba, kunokubonwa lula ukuba umfazi ungatyebi ngokuqhelekileyo ekukhulelweni.
Ezi mpawu zinokuthi zingabonakali ukuba awuhlali ngokusondeleyo kunye nowesifazane okhulelweyo. Kodwa nangona kunjalo, ziqapheleke ngakumbi xa siphakathi kokukhulelwaXa isisu sikhula kakhulu, imilenze, iingalo, ubuso okanye izinqe nazo ziba banzi ngokwemvelo ngenxa yokukhulelwa. Nangona olu tshintsho alufani kubo bonke abafazi, lubonakala kakhulu xa lungenzeki ngokuqhelekileyo.
Imingcipheko ye-pregorexia kumama nosana
Imingcipheko yolu kuphazamiseka kokutya ekukhulelweni kunokuba baninzi, kumama nakumntwana. Okokuqala, umntwana ongekazalwa akafumani izondlo ezifunekayo ukuze akhule ngokuqhelekileyo. umntwana unako ubunzima bokuzala, iingxaki zokuphefumla, ukuzalwa ngaphambi kwexesha, ukungahambi kakuhle okanye ukuphazamiseka kwemithambo-luvo yobunzima obahlukeneyo, phakathi kwabanye.
Kumama, i-pregorexia inokubangela iingxaki ezinzulu ezifana ne-anemia, ukungondleki, i-arrhythmias, ukulahleka kweenwele, i-bradycardia, ukunqongophala kweeminerali, ukuchithwa kwethambo, njl. Kwaye kungekhona kuphela ngexesha lokukhulelwa, iingxaki zempilo zinokuchaphazela ixesha elide. Ukongeza kuzo zonke iingxaki zempilo yengqondo ukuba oku kwenzeka ntoni.
Ke ngoko, ukuba ucinga ukuba unengxaki ye-pregorexia ekukhulelweni kwakho, kubaluleke kakhulu ukuba uzivumele ukuba uhoywe kwaye uzibeke ezandleni zengcali. Ukhuseleko lwakho kunye nempilo yomntwana wakho ozayo, kuba kamva uya kukwazi ukubuyela kubunzima bakho, kodwa ukuba kukho iingxaki ekuphuhlisweni kwayo, awusoze ube nethuba lokubuyela emva.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Oomama » Ukukhulelwa » Pregorexia, uloyiko lokufumana ubunzima ngexesha lokukhulelwa